Indlela ufake iphasiwedi ku siqoqelalwazi (Esadleni sakho se-Windows 8) futhi kufanele kube njalo?
Njalo umsebenzisi ufuna ukuba umnikazi iphrofayela ubuntu nokuvikeleka esiphezulu, kodwa idinga ukwazi ukuthi ufake iphasiwedi ku siqoqelalwazi (Esadleni sakho se-Windows 8). Le nkulumo namhlanje.
Indlela ufake iphasiwedi ku siqoqelalwazi (Esadleni sakho se-Windows 8): ukuthi yini okufanele uyenze?
Iphasiwedi iyadingeka ukuze isivikelo idatha yakho. Ngezansi sibheka indlela ufake iphasiwedi (i-Windows 8) ku-akhawunti yakho. Ukukhawulela ukufinyelela kukhompyutha yakho, uzovikela idatha yakho eyimfihlo. Ukuze udale iphasiwedi-Windows 8 yesistimu yokusebenza, kuzomele uthole amalungelo impande. Ngakho, ukuya "Control Panel." Wena ubone ukuthi kungenzeka ukuba "Qala".
Ngemva kwalokho, chofoza umcibisholo, okuyinto unomthwalo kwathatha amasevisi esungulwe, kanye ne-software yesistimu yokusebenza. Wokushintsha nezigaba "Control Panel." Khetha ngaphansi kwesihloko esithi "Accounts, Sokuphepha Komndeni." Ngaphambi sivula "Izilungiselelo" sigaba, lapho kwathatha "Ama-akhawunti womsebenzisi".
Maphakathi iwindi iphuzu, okuyosivumela ukuya "Phatha elinye irekhodi." Phambi kwethu sivula iwindi lapho sikhetha ukudala iphasiwedi ye-akhawunti. Qhubekela "Dala iphasiwedi". Thina ufake iphasiwedi, futhi ngalesosikhathi phinde it ukuqinisekisa ukuthi iqoqo efanele. Bese uchofoza "Dala iphasiwedi". Waba yini umphumela wesibindi izenzo kwenziwe ingatholakala amazwibela ku-akhawunti yakho. Ngakho esiphethweni kanjani ukubeka iphasiwedi kukhompyutha yakho (i-Windows 8). Ngezansi, sizoxoxa kahle ukuthi kufanele kube enhle inhlanganisela eyimfihlo.
Indlela ufake iphasiwedi ku siqoqelalwazi (Esadleni sakho se-Windows 8): yini ukukhetha?
Kumuntu wangaphandle ayizange iphathwe ukuqagela iphasiwedi kwikhompyutha yakho, kubalulekile, ukuze inhlanganisela eyimfihlo kwakunzima futhi engaziwa kunoma ubani, kodwa kulula ukukhumbula ngawe. Ochwepheshe batusa ukuthi iphasiwedi yakho ukuhlangabezana nezidingo ezilandelayo: ubude bube okungenani izinhlamvu ezingu-5 (izinhlamvu eyengeziwe kufanele lisetshenziswe inhlanganisela eyimfihlo).
Sebenzisa izinhlamvu ezincane kanye ngezinhlamvu ezinkulu. Ungasebenzisi iphasiwedi, oyingxenye umuntu uzokwazi ukucacisa ngokusebenzisa amandla isilo esinonya: endaweni yakho yokuzalwa, igama noma ngosuku owazalwa ngalo. Ngenxa izinga iphasiwedi ukuvikela ikhompyutha yakho siqu kusuka zonke izinhlobo ukufinyelela okungagunyaziwe.
Abaqondisi System ukuncoma
Kunezindlela eziningana izincomo ezivela professional uhlelo abaphathi, ukuze kulekelelwe ukuphepha okukhulu ekuvikeleni PC yakho. Ngokwesibonelo, batusa okwandisa ubukhulu iphasiwedi izinhlamvu 5-8.
Uma kukhona kungenzeka ukuthi ungase ukhohlwe iphasiwedi yakho, udinga qiniseka ukuba banakekele inqubo yokutakula. Uma sizoxoxa izincomo zethu, ukuvikelwa PC yakho kuyoba okunokwethenjelwa ngempela. Phawula futhi ukuthi uma udinga ukusetha iphasiwedi nomqondisi we-Windows 8, izincomo letinikwe lapha ngenhla Site Kulokhu.
Ngo ngentuthuko yakamuva ye inkampani "Microsoft" zihlale izigidi nabalandeli emhlabeni jikelele. Nokho, ngokuvamile kuba khona izimo lapho umsebenzisi nje ukhohlwe iphasiwedi ku-Windows 8. Ngenhlanhla, ukuxazulula le nkinga, akusho ukuthi ukuthumela computer Ochwepheshe sesevisi, ukukhokha amasevisi abo ngamazinga double.
Khipha iphasiwedi Ungahlala ube nguwe, ngoba lokhu kukhona lonke ngezindlela ezimbili ezilula. Cabangela lokho okungase kwenziwe esebenzisa uhlelo lokusebenza. Phawula ukuthi kule ndaba, phakathi naleyo nqubo ukusetha kabusha iphasiwedi kuzosusa yonke idatha yomsebenzisi, olutholakalayo kukhompyutha (izithombe, amadokhumenti, nokunye okuningi). Ngaphezu kwalokho, uhlelo ezifakwe uzonyamalala.
8 Kulula Izinyathelo
Okokuqala, qiniseka ukuthi i-computer yakho ixhunywe kwinethiwekhi. Ukunqamula kusuka amapayipi phakathi nenqubo ethile yokuthola kabusha engathandeki kakhulu. Okulandelayo, kudingeka chofoza inkinobho "Amandla" ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini Siyakwamukela ohlelweni lokusebenza. Sibona kwimenyu pop-up. Cindezela ukhiye we-Shift futhi uyibambe ngesikhathi esifanayo thina uchofoze imenyu kwento "Qala kabusha".
"Ukukhetha isenzo" ifasitela izovela phambi kwethu. Qhubekela "Ukuxilonga" sigaba ngokuchofoza ngayo igundane. Siyabonga ukuvula ukubuya imenyu uhlelo esimweni saso sokuqala ngokukhetha into efanele. Chofoza inkinobho "Okulandelayo", ulinde ukuphela kwalesi simiso yokutakula. Uma ikhompyutha akanayo ukufakwa CD, inkosi uzodinga ukuyisebenzisa ukuqedela inqubo yokutakula.
Ngemva kwemizuzu embalwa, cindezela "Vele ukususa amafayela" kwimenyu entsha. Ngemva kokuqeda lezi zinyathelo, sizokwenza ukubuyela kuhulumeni beqeda ukufakwa ohlelweni kukhompyutha. Ngakho, kubalulekile ukuba amdale yosebenzisayo, kanye ukufeza izilungiselelo ezidingekayo izinhlelo ideskithophu.
Indlela ezimbili: nohlelo ukusetha kabusha iphasiwedi
Ukuze usethe kabusha iphasiwedi, zidinga kudalwa oqalisekayo-USB drive, kuyoba usizo olukhulu emsebenzini wethu. Lapho udala oqalisekayo ye-USB drive , yonke idatha abezindaba bayobhujiswa. Sidinga ukulanda kusuka ku-intanethi nohlelo olukhethekile, izixazululo ezinjalo ziningi.
Njengoba "windose 7" ukwenza disk defragmentation?
Lena ezithakazelisayo: kanjani ukushintsha ulimi kukhibhodi?
Kungani, emva kokuphothulwa Windows khompyutha kuvaliwe?
Indlela ukuhambisa kubha yomsebenzi phasi ngezindlela ezingafaniko
Indlela ukufaka Wi-Fi ekhaya bebodwa?
Indlela baphuze tequila emhlabeni? amasiko abathandwayo ukusetshenziswa isiphuzo esishisayo
Thatha igama original inja samantombazane
Yomiselela imoto air conditioning compressor eziveza
Ingabe kunenzuzo ukuthatha loan imoto ngaphandle inkokhelo phansi?
Kuyini esiphuthumayo? Brondirovanie izinwele izinwele mnyama noma ukukhanya?
Izici wezoMnotho kanye kwendawo Italy
Ubani uHelen Kaminskaya?